Yonghong Liang Ph.D ဘွဲ့ကို သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita - APICMO
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိပညာ > Yonghong Liang Ph.D ဘွဲ့ကို ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဥ်း
Yonghong Liang Ph.D ဘွဲ့ကို ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဥ်း
စက်တင်ဘာ 2006-လက်ဆောင် Ph.D (အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ) ဆီသို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်
1 ။ dapivirine (TMC120) နှင့် HIV ပိုး-1 ပြောင်းပြန် transcriptase အကြားအပြန်အလှန်၏သီအိုရီလေ့လာမှု
2 ။ benzyl အစားထိုး diarylpyrimidines ၏ quantitative ဖွဲ့စည်းပုံမှာ-လှုပ်ရှားမှုကြားဆက်ဆံရေးလေ့လာမှု
3 ။ HIV ပိုး-1 ၏ Non-nucleoside inhibitors transcriptase reverse အဖြစ်αသို့မဟုတ်β naphthyl ၏ဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်နှင့် SAR တွင်လေ့လာမှုများ diarylpyrimidines အစားထိုး
4 ။ HIV ပိုး-1 ပြောင်းပြန် transcriptase နဲ့ Integrase ၏ dual-inhibitors အဖြစ်ယဲ့၏ဒီဇိုင်းနှင့်ပေါင်းစပ်
1 ။ 2-hydroxybenzophenone များအတွက် ground- နှင့်စိတ်လှုပ်ရှား-ပြည်နယ် intramolecular ပရိုတွန်လွှဲပြောင်း, 8-hydroxy-4H-naphthalen-1-One, 5-hydroxy-4, 5-naphthoquinone, 1-hydroxy-9, 10-anthraquione, 7- hydroxy -1-indenone, 5, 8-dihydroxy-1, 4-naphthoquinone), 4, 9-dihydroxyperylene-3, 10-quinone နှင့် hypocrellin တစ်ဦးကသီအိုရီနည်းလမ်းများအားဖြင့်လေ့လာခဲ့ခံခဲ့ရသည်။
2 ။ 5-hydroxyisoxazole-ရေ, DNA ကို (အာအန်အေ) အခြေစိုက်စခန်း dimer နှင့်အခြေခံ-N ကို-methylformamide DFT နည်းလမ်းများအားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်၏ရှုပ်ထွေးသောအတွက်အဆိုပါမြေပြင်-ပြည်နယ် inermolecular ပရိုတွန်လွှဲပြောင်း။
ketone နှင့် aldehyde ၏ရူပပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် 2002-2003 ဘက်စုံဖွဲ့စည်းပုံမှာ-ပိုင်ဆိုင်မှုဆက်ဆံရေးမျိုး
1 ။ Liang, YH; ချန်သည်အပြန်အလှန် betweenndapivirine နှင့် HIV-3 ပြောင်းပြန် transcriptase အပေါ် FE ONIOM DFT / PM1 တွက်ချက်မှုတစ်သီအိုရီလေ့လာမှု။ မူးယစ်ဆေး Discover ။ Ther ။ 2007, 1, 57-60 ။
2 ။ Liang, YH; HIV ပိုး-1 ဆန့်ကျင် diarylpyrimidines အဘို့ချန်, FE QSAR လေ့လာမှုများ transcriptase ရိုင်း-type နှင့် Mutant မျိုးကွဲ reverse ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Med ။ Chem ။ 2009, 44, 625-631
3 ။ Liang, YH; Feng တို့, XQ; Zeng, ZS; Chen က FE; Balzarini, ဂျေ .; Pannecouque, C ကို .; de Clercq, အီးဒီဇိုင်း, Synthesis, နှင့် HIV-1 ကို Reverse Transcriptase ၏က Non-Nucleoside inhibitors အဖြစ် Naphthyl-အစားထိုး Diarylpyrimidines ၏ SAR ။ ChemMedChem 2009, 4, 1537-1545 ။
4 ။ Feng တို့, XQ; Liang, YH; Zeng, ZS; Chen က FE; Balzarini, ဂျေ .; Pannecouque, C ကို .; de Clercq, အစွမ်းထက်ဆန့်ကျင်တွင် HIV-1 လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူ DAPY Analogues ၏အီးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပြုပြင်မွမ်းမံ။ ChemMedChem 2009, 4, 219 ။
5 ။ Zeng, ZS; Liang, YH; Feng တို့, XQ; Chen က FE; Balzarini, ဂျေ .; Pannecouque, C ကို .; de Clercq, လက်ခံခဲ့သည် Non-nucleoside HIV ပိုး-1 ပြောင်းပြန် transcriptase, ChemMedChem 2010 ၏ inhibitors အဖြစ် diarylpyrimidines ၏အီးခဲ optimization ။
6 ။ Liang, YH; ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်ရီ, PG သီအိုရီလေ့လာမှုများ, alkannin ၏လုံ့လရှိသူနှင့် intramolecular ပရိုတွန်လွှဲပြောင်း။ ဓာတုရူပဗေဒ Lettters, 2007, 438, 173 ။
7 ။ Liang, YH; ရီ, PG, ဖုန်ကြားရှင်, ဖွဲ့စည်းပုံ၏ HL သီအိုရီလေ့လာမှု, hypocrellin အေဓာတုရူပဗေဒ Lettters, 2008, 466, 6-10 ၏လုံ့လရှိသူနှင့် intramolecular ဟိုက်ဒရိုဂျင်လွှဲပြောင်း။
8 ။ Liang, YH; ရီ, PG ။ Cao, 5-hydroxyisoxazole အတွက်အရည်ပျော်ပစ္စည်း-ကူညီပရိုတွန်လွှဲပြောင်းအပေါ် CZ တစ်ဦးကသီအိုရီလေ့လာမှု။ မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံ၏ဂျာနယ်: Theochem, 2005, 729, 163-167 ။
9 ။ ရီ, PG .; Liang, YH; Cao, CZ Intramolecular ပရိုတွန်သို့မဟုတ်မြေပြင်နှင့် 2-hydroxybenzophenone ၏စိတ်လှုပ်ရှားပြည်နယ်များအတွင်းရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်-အက်တမ်လွှဲပြောင်း: တစ်ဦးကသီအိုရီလေ့လာပါ။ ဓာတုရူပဗေဒ, 2005, 319, 297 ။
10 ။ ရီ, PG .; Liang, YH မြေ၌ intramolecular ပရိုတွန်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားပြည်နယ်များအပေါ် conjugation နှင့်လက်အောက်ခံသက်ရောက်မှု၏သီအိုရီလေ့လာမှုများ။ ဓာတုရူပဗေဒ, 2006, 322, 382 ။
11 ။ ရီ, PG .; Liang, YH တန်, အထီးကျန် 5-hydroxyisoxazole-ရေရှုပ်ထွေးသောအတွက် intermolecular ပရိုတွန်လွှဲပြောင်းတုံ့ပြန်မှု၏ ZQ သီအိုရီလေ့လာမှု။ ဓာတုရူပဗေဒ, 2006, 2006, 322, 387 ။
12 ။ Liang, YH; Zeng, ZS; Feng တို့, XQ; Chen က FE; Balzarini, ဂျေ .; Pannecouque, C ကို .; de Clercq, အီးစင်ပြိုင် Synthesis နှင့်အစွမ်းထက်ဆန့်ကျင်တွင် HIV-1 လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူ Diarylpyrimidines ၏ဇီဝဗေဒအကဲဖြတ်။ Med ။ Chem ။ 2010, 18 (13), 4601 ။
13 ။ Liang, YH; Zeng, ZS; Feng တို့, XQ; Chen က FE; Balzarini, ဂျေ .; Pannecouque, C ကို .; de Clercq, HIV ပိုး-1 ၏ dual-inhibitors အဖြစ်ယဲ့၏အီးဒီဇိုင်း transcriptase နဲ့ Integrase reverse ။ ဂျေ Med ။ Chem ။
14 ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတုဗေဒ (8), ဖုန်ကြားရှင်, စတုရန်းမိုင် Ed ကအတွက် Chen က FE, Liang သည် Multi-ပစ်မှတ် Anti-AIDS ရောဂါမူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ် YH လတ်တလောတိုးတက်မှု, Progess ။ , 2011, 167 ။
15 ။ Chen က FE, Liang, YH, Zeng, ZS ရာခိုင်နှုန်း / CN2009 / 075931 ။
16 ။ Zeng, ZS, Liang, YH, Zhang က, JY, Xiong, JC တရုတ်မူပိုင်ခွင့် ,, CN201110070027.4
1 သည်“ Yonghong Liang Ph.D ဘွဲ့ကိုယူခဲ့သည်။ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဥ်း"
10 မှာ 24 / 2019 / 1: 20 pm တွင်
ငါ Bookmark ကိုကျွန်ုပ်၏ Bookmark ဝက်ဘ်စာမျက်နှာစာရင်းသို့မကြာမီပြန်လည်စစ်ဆေးလိမ့်မည် ကျေးဇူးပြု
ကျွန်ုပ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုလည်းစစ်ဆေးပါ၊
နောက်တစ်ခု Next post: Zhaosen Zeng Ph.D ဘွဲ့ကို ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဥ်း